कोरियामा २ /३ हजारको लोभमा हुण्डी :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
कोरियामा २ /३ हजारको लोभमा हुण्डी
खाडी मुलुकबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, जहाँ तुलनात्मक रुपमा मासिक कमाई थोरै (२ देखि ३ सय डलर) गर्नेहरुको संख्या बढी छ । कोरियामा तुलनात्मक रुपमा शिक्षित युवाहरु आउँछन् । मासिक औषत कमाई झन्डै डेढ लाख रुपैयाँ हुन्छ, तर ९० प्रतिशत भन्दा बढी रकम अवैधानिक माध्यममार्फत नेपाल भित्रिन्छ । कुराकानीको शिलशिलामा एक दिन लिंक एसिया कम्पनीका प्रवन्धक आरपि देवकोटाले भने – हामी नेताले देश बिगारे भनेर सँधै गाली गर्छौ । तर कोरियामा छौं, यति धेरै कमाउँछौं र पनि २ /३ हजार रुपैयाको लोभमा हुण्डिबाट पैसा पठाउँछौ । के देश बिगार्न हाम्रो चाहिँ भुमिका छैन ? अनि त्यो नेताले देश बिगार्यो भनेर गाली गर्ने हाम्रो हैसियत खै ?
दक्षिण कोरियामा रोजगारीको शिलशिलामा रहेका नेपालीहरुको पसिनाको कमाई नेपालमा वैधानिक माध्यमबाट पठाउन कोरियामा नेबिल बैंक र सनराइज बैंकले सेवा दिइरहेका छन् । लगत्तै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले पनि सेवा दिने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । वैधानिक माध्यमबाट पहिलोपटक कोरियाबाट कारोबार शुरु गरेको नबिल बैंकको अनुमानित ग्राहक संख्या झन्डै १२ हजार रहेको नबिल बैंक कोरिया प्रतिनिधि बिदुर निम्लेखु बताउँछन् । तर मासिक रुपमा पैसा पठाउनेको संख्या औषत ७०० जना रहेका जानकारी बैंकका प्रतिनिधि निम्लेखुले दिए । सनराइज बैंकबाट हालसम्म ६ हजार ५०० जनाले सेवा लिइसकेको सनराइज बैंकका प्रतिनिधी कबिर ध्वज अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो ४ महिनामा सनराइज बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवाले ग्राहकहरुको चासो ह््वात्तै बढेको जानकारी प्रतिनिधी अधिकारीले दिए । सनराइज बैंकमार्फत मासिक ६ देखि ७ लाख डलर भित्रिने गरेको छ भने नबिल बैंकमार्फत झन्डै १० लाख डलर । दोङ्देमुन हिस्ट्री एण्ड कल्चर पार्कबाट नेबिल बैंकको सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भने सनराइज बैंकको आनसानबाट ।
दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन बहादुर सिंहले दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार दूतावास खोल्ने निर्णय गरेसँगै हुण्डि नियन्त्रणका लागि पनि आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । दूतावासको त्यो कदमको सामाजिक सन्जाल फेसबुकमार्फत स्वागत भइरहँदा पूर्वराजदूत कमानसिंह लामाको फेसबुक पेजबाट भने आइतबार दूतावास खोल्ने निर्णयले हुण्डिवालाको माग पुरा भएको भनेर कमेन्ट आयो । हुण्डि नियन्त्रणको लागि दूतावासको तर्फबाट के पहल भइरहेको छ त ? राजदूत अर्जुनबहादुर सिंहले हुण्डि निरुत्साहित गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल शुरु गरिसकेको दावी गरेका छन् । यससम्बन्धि आवश्यक प्रक्रियाका लागि दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पत्र लेखिसकेको जानकारी राजदूत सिंहले हेल्लो नेपालकोरिया डटकमलाई दिए । साथै यहाँ रहेका सामाजिक संघसंस्थाहरुले सक्रियता नदेखाएकोमा राजदूत सिंहले गुनासो गर्दै सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।